သားလေးအတွက်အရမ်းဂုဏ်ယူနေတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် – Cele Channel
GOLF ကစားတာကို ချန်ပီယံဆုရရှိတာပါတဲ့
အသက် ၁၂ နှစ်နဲ့အောက် ကျောင်းသားလေးတွေ ဂေါက်ပြိုင်ပွဲမှာ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ရဲ့ သားလေးကတော့ ပထမဆုကြီးကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ါတယ်တဲ့.
ဒီလို အားကစားမှာထူးချွန်တဲ့ သားလေးအတွက် မေမေထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ကတော့ တပြုံးပြုံးနဲ့ ပီတိတွေဖြာနေရောပေါ
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာလဲ အခုလိုလေးရေးထားပါသေးတယ်…
ဒီနေ့ 13th Junior Golf Myanmar Championship .. 2018 ( 12 year & under ) မှာ သားလေး …
WINNER ဖြစ်သွားတယ်လေ ..
( score : 84, 83, 74 )
Thank you … သား …
(ရခဲ့ဖူးတဲ့ Hole in One အတွက် ဆုချီးမြှင့်ပေးတဲ့ JGM ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် )
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သားလေးရဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
ပရိတ်သတ်တွေကို တက်တူးမထိုးကြဖို့ တားမြစ်လိုက်တဲ့ အဆိုတော် ပိုပို
Posted on February 20, 2018 Author Myo Min Htet
နာမည်ကြီး အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပိုပိုကတော့ သူမရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကိုတက်တူးမထိုးကြဖို့ တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ အရင်ကလည်းတားမြစ်နေကျဖြစ်ပြီး မနေ့ကလည်း ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာပို့စ်တစ်ခုတင်ပြီး ထပ်ပြောလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင် တက်တူးခရေစီ အဆိုတစ်ယောက်အဖြစ် ပရိတ်သတ်တွေကို သိစေထားပြီး ယခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ အခွေအချို့နာမည်များကိုလည်း တက်တူးထိုးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တော့ ပရိတ်သတ်တွေကလည်း သူမကိုအားပေးမှုကို ပြဖို့အတွက် တက်တူးတွေ လိုက်ထိုးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပရိတ်သတ်တွေ ဆက်မထိုးစေချင်တော့ကြောင်း သူမရဲ့ဆန္ဒကိုပြောလာတာပါ။ တက်တူးကို ကြိုက်ပေမဲ့ ကျမ ပရိတ်သတ်တွေကိုတော့ မထိုးပါနဲ့လို့ အမြဲ တားမြစ်နေကျပါ မိန်းကလေး ပရိတ်သတ်တွေကို ထပ်မှာချင်တာက ပိုပိုကို အားကျ လို့ တက်တူး ထိုးတာမျိူး မဖြစ်စေချင်ဘူး bec I am an artist. You are not. အရမ်း ထိုးချင်ရင် ကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ထိုး […]
ယခုတစ်လောမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ အောင်ရဲလင်းရဲ့ချစ်သူအသစ် ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပရိသတ်အကြားမှာ အပြောများနေကြပါတယ် ။ အောင်ရဲလင်းကတော့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့အညီ ချစ်သူကောင်းမလေးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်လို့နေပါတယ်။ အောင်ရဲလင်းက ရည်းစားထားတဲ့အခါ ခိုးဝှက်ပြီး မထားတက်သလို တွဲသမျှရည်းစားတိုင်းကလဲ ပရိသတ်မသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါဘဲ။ တွဲသမျှ ကောင်မလေး တိုင်းချပြနေတဲ့ အောင်ရဲလင်း တစ်ယောက် ရည်းစားများတယ်ဆိုပြီး နာမည်တွင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ အောင်ရဲလင်းရဲ့ အချစ်ရေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူ့ရဲ့ ဆရာမ ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူသျှင် ခုလိုဘဲပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင် က ” သူ့ကိုအတည်တကျလက်တွဲဖော်ရစေချင်တယ်။ သူကတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါရစေလို့ ပြောနေကျပါ ဒါပေမယ့် အသက်ကလဲ ၃၀၀န်းကျင် ရှိလာပြီဖြစ်လို့ ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက်အတွက် တည်တည်တံ့တံ့ရွေးချယ်မှုလုပ်စေချင်တယ် ” ဆိုပြီး အိုအေစစ် ဂျာနယ်ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူသျှင် ဟာ အောင်ရဲလင်း […]
ချစ်သက်တမ်း (၂)နှစ်ပြည့်မှာချစ်သူ ၀ါဆိုမိုးဦးဆီးက ရတဲ့ လက်ဆောင်ကို ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ ဖြိုးလေး’
Posted on December 12, 2017 Author Myo Min Htet
Snare အဖွဲ့မှ အဆိုတော် ဖြိုးလေးနဲ့ မော်ဒယ်၊မင်းသမီး၊အဆိုတော် ၀ါဆိုမိုးဦးတို့ကတော့ ချစ်သူသက်တမ်း နှစ်နှစ်ပြည့် သွားပါပြီ။ ချစ်သက်တမ်း နှစ်နှစ်ပြည့် အနေနဲ့ ၀ါဆိုမိုးဦးဆီကနေ လက်ဆောင်ရထားကြောင်း ဖြိုးလေးက သူ့ရဲ့ fb မှာ ကြွား ထားပါတယ်။ .S/ ဘာလိုလိုနဲ့ ၂ နှစ်တောင်ပြည့်သွားပြီ ဆိုးသမျှ ရိုင်းသမျှကို သည်းညည်းခံပြီး ဆက်ချစ်နဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ….” ဆိုပြီး တင်ထားပါတယ်။ ဖြိုးလေးနဲ့ ၀ါဆိုမိုးဦးတို့ကတော့ ရန်ဖြစ် ပြန်ချစ် ဆယ်လီစုံတွဲတွေထဲက တစ်တွဲပါ။ဖြိုးလေးပုံရဲ့ အောက်မှာတော့ ချစ်သက် တမ်းနှစ်နှစ်ပြည့် သွားတဲ့ သူတို့စုံတွဲကို ၀ိုင်းပြီး ဆုတောင်းပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ from ဖြိုးလေးနဲ့ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ fb